“Vaida Kuti Ndizvionere Ndoga Zvinodzidziswa neBhaibheri” | Bhaibheri Rinochinja Upenyu
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Lingala Lithuanian Malagasy Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Xhosa Yoruba Zande Zulu
“Vaida Kuti Ndizvionere Ndoga Zvinodzidziswa neBhaibheri”
Yakataurwa naLuis Alifonso
GORE ROKUBEREKWA: 1982
NYIKA: DOMINICAN REPUBLIC
NHOROONDO YOUPENYU: AKARERERWA MUCHITENDERO CHEVAMORMON
Ndakaberekerwa muSanto Domingo, guta guru reDominican Republic uye ndiri gotwe mumhuri ine vana vana. Vabereki vangu vainge vakadzidza chaizvo uye vaida kuti tikure tiine vanhu vanotikurudzira kuita zvakanaka. Vakatanga kuonana nemamishinari echitendero chevaMormon makore mana ndisati ndazvarwa. Vakayemura kuchena uye unhu hwakanaka hwaiva nevakomana vacho vachibva vangotanga kupinda chitendero ichi chinonziwo Church of Jesus Christ of Latter-day Saints uye ndivo vakava imwe yemhuri dzakatanga kupinda chechi iyi muDominican Republic.
Sezvandaikura, ndaifarira kuwadzana nevamwe kuchechi uye ndairemekedza dzidziso yevaMormon yokukoshesa upenyu hwemhuri uye yokuva netsika dzakanaka. Ndaidada nokuva muMormon uye ndaida kuzova mumishinari.
Pandakanga ndava nemakore 18, mhuri yedu yakatamira kuUnited States kuitira kuti ndienderere mberi nedzidzo yekuyunivhesiti. Pashure perinenge gore, amainini nababamunini vangu vari Zvapupu zvaJehovha vakatishanyira kuFlorida. Vakatikoka kuti tipinde navo gungano. Zvakandibaya mwoyo kuona kuti vanhu vose vaivhura maBhaibheri vachiverenga uye vainyora manotsi. Saka ndakakumbira chinyoreso nepepa ndokutanga kunyorawo manotsi.
Pashure pegungano racho amainini nababamunini vakati vaigona kundibatsira kudzidza Bhaibheri sezvo ndaida kuva mumishinari. Ndakafunga kuti yaiva pfungwa yakanaka nokuti panguva iyoyo ndaingonyanya kuziva nezvebhuku rinonzi Book of Mormon asi ndisinganyatsozivi Bhaibheri.
Pataikurukura nezveBhaibheri pafoni, amainini nababamunini vaigarondikurudzira kuona kana zvandaitenda zvaienderana nezvinodzidziswa neBhaibheri. Vaida kuti ndizvionere ndoga zvinodzidziswa neBhaibheri.
Pane zvakawanda zvaidzidziswa muchitendero chevaMormon zvandakanga ndabvuma, asi ndakanga ndisina chokwadi kana zvaiwirirana nezvinodzidziswa neBhaibheri. Amainini vakanditumira magazini yeAwake! yaNovember 8, 1995, yakabudiswa neZvapupu zvaJehovha yaiva nenyaya dzaitaura nezvevaMormon. Zvakandishamisa kuti ndaisaziva dzidziso dzakawanda dzevaMormon. Izvozvo zvakaita kuti nditsvakurudze panzvimbo yokubudisira mashoko yevaMormon paIndaneti kuti ndione kana zvaitaurwa neAwake! zvaiva zvechokwadi. Ndakaona kuti ndezvechokwadi uye zvakatowedzera kusimbiswa pandakashanyira mamiziyamu evaMormon kuUtah.
Ndakanga ndagara ndichidavira kuti bhuku rechechi iyi rinonzi Book of Mormon rinobvumirana neBhaibheri. Asi pandakatanga kunyatsoverenga Bhaibheri, ndakaona kuti dzidziso dzechiMormon dzakasiyana nezvinotaurwa neBhaibheri. Somuenzaniso pana Ezekieri 18:4, Bhaibheri rinoti mweya unofa. Asi Book of Mormon, pana Alma 42:9 rinoti: “Mweya haungambofi.”
Ndainetseka nokusabvumirana kwaiita dzidziso dzacho neBhaibheri uye kukwidziridza kwavaiita nyika yavo. Somuenzaniso, vaMormon vanodzidziswa kuti munda weEdheni waiva muJackson County, kuMissouri, U.S.A. Uye vatungamiriri vechechi vanodzidzisa kuti Umambo hwaMwari huchatonga nyika yose pachishandiswa hurumende yeUnited States.
Ndainetseka kuti izvi zvaizoita kuti zvinhu zvimire sei munyika yandakaberekerwa nemune dzimwewo nyika. Ndakataura nyaya iyi pafoni nemumwe mukomana wemuchechi iyi uyo aidzidzira umishinari paakandifonera rimwe zuva ari manheru. Ndakamubvunza ndisingapotereri kuti aizoda here kurwisana nevaMormon vekune imwe nyika kana nyika yake yaizorwisana neyavo. Ndakashamiswa paakati aizovarwisa. Ndakatanga kunyatsoongorora zvandaitenda uye ndakabvunzawo vatungamiriri vechechi yevaMormon nezvazvo. Vakandiudza kuti mhinduro dzemibvunzo yangu dzakanga dzisinganzwisisiki uye kuti nerimwe zuva dzaizojeka.
Zvavakandiudza zvakandiodza mwoyo uye zvakaita kuti nditange kunyatsoongorora mafungiro angu nechaiita kuti ndide kuva mumishinari wechiMormon. Ndakaona kuti chimwe chacho ndechokuti ndaingoda kubatsira vanhu. Ndaiyemurawo kuremekedzwa kwaiitwa mamishinari. Asi ndakaona kuti ndaisaziva zvakawanda nezvaMwari. Ndaisanyatsokoshesa Bhaibheri kunyange zvazvo ndakanga ndagara ndichiriverenga kakawanda. Ndakanga ndisingazivi kuti Mwari akasikirei nyika uye vanhu.
Kudzidza kwandaiita Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha kwakaita kuti ndizive zvakawanda zvaisanganisira zita raMwari, zvinoitika patinofa uye basa raJesu pakuzadziswa kwechinangwa chaMwari. Ndakanga ndava kunzwisisa zviri nani bhuku iri rinokosha zvikuru uye ndaifara kuudzawo vamwe chokwadi chandaidzidza. Ndaiziva kuti Mwari ariko asi iye zvino ndakanga ndava kugona kutaura naye mumunyengetero seShamwari yangu yepedyo. Ndakabhabhatidzwa ndokuva mumwe weZvapupu zvaJehovha musi wa12 July 2004, uye ndakatanga kushanda semushumiri wechiKristu wenguva yakazara pashure pemwedzi mitanhatu.
Ndakashanda kwemakore mashanu pamuzinda weZvapupu zvaJehovha wenyika yose kuBrooklyn, muNew York. Ndaifara chaizvo kuti ndaibatsirawo pabasa rokubudisa maBhaibheri nemabhuku anotsanangura Bhaibheri ayo ari kubatsira mamiriyoni evanhu uye ndinofara kuti ndichiri kubatsira vamwe kudzidza nezvaMwari.